#ANC54: Ubuholi be-ANC bumemezele ukushintsha kwenani lamalungu azovota | News24
#ANC54: Ubuholi be-ANC bumemezele ukushintsha kwenani lamalungu azovota
eThekwini - IPhini likaNobhala we-ANC uveze izizathu zokuthi kungani kuthathe isikhathi ukuqinisekiswa kwabantu abazovota kule nkomfa.
UJessie Duarte uthe ubuholi bukaKhongolose kwaZulu-Natal, Free State kanye namagatsha angu-35 aseNorth West abavumelekile ukuvota kule nkomfa.
"Lokhu kube yisinqumo esenziwe ngokulandela umthetho kanti futhi nawo lawa magatsha akwamukele lokho. Kukhona namanye amagatsha agcine esekhishwa ngenxa yezimo ezifana nokungaqinisekiswa kwemininingwano yabo ngokwamavoti asuka emagatsheni ahlukahlukene," kusho yena.
Uthi kuwo wonke lo msebenzi, kungcine sekubonakala nokuthi kukhona namanye amagatsha abekhishiwe kodwa ngokuhlolisisa kahle inqubo yokusebenza kwabonakala ukuthi kumele abuyiswe ngoba akhishwe ngephutha, lawa ngamatsha ase-Eastern Cape naseWestern Cape abebekhishiwe kodwa babuyiselwa ngemuva kokutholakala ukuthi bakhishwe ngephutha.
OLUNYE UDABA:Kuningi okumelwe "kuqondiswe" ngamagama amalungu azovota - Mbete
Lona ngomsebenzi omningi futhi akusiwona umsebenzi womuntu oyedwa, yingakho kuthathe isikhathi eside kangaka.
Inani labantu abazovota lisuke ku-5000 layohlala ku-4776.